Ahoana ny fomba fitsangatsanganan-tsakafo mofomamy - Ny fambolena mofomamy mofomamy • Yurie BSF
Ahoana ny fomba fitsangatsanganana maimaim-poana
Yurie | Dec 26, 2018 | Ahoana no hambolena siramamy?
Ahoana no handoavan-tsakafo
Azafady azafady amin'ny siansa momba ny fanontaniana ary valio momba ny fiompiana sigara
Ity dia ao amin'ny SHARE (fizarana)
amin'ny media sosialy toy ny WA, FB, G +, Pinterest, LinkedIn Twitter etc.
Antenaina fa ny fizarana ny fiantrana dia afaka ny ho tahirintsika amin'ny fotoam-piainana. Aaamiinn
Mety tsy misy loto ve?
Ho an'ny fahasitranam-boankazo tsy misy taratra dia mety ho, saingy mety hampidi-doza olitra marefo ny sigara.
Ary ny isan'ny hazandrano voavoly ao anaty dobo dia tsy mety ho betsaka.
Raha betsaka loatra ny voa dia tsy ampy oksizenina ary mety hiteraka fahafatesana.
Tokony ho fantatsika fa ny tanjon'ny lozam-pandriana ao amin'ny dobo fametavetana dia ny hampitombo ny habetsahan'ny oksizenina ao anaty dobo, mba hahafahantsika mampitombo ny habetsaky ny voankazo voajanahary ao anaty dobo.
Ahoana ny fomba hiatrehana ireo dobo lehibe izay masira maro?
Toy izao ny fomba:
Amin'ny famoahana ny tohatra eo ambonin'ny dobo lava-dranomandry. Ity rindrina ity dia toy ny andam-baravarankely masoandro miditra ao anaty dobo. Mba hampihenana ny fitomboan'ny moss.
Manaova fanasan-damba miaraka amin'ny tavoahangy mainty hoditra.
Ilaina ihany koa fara-fahakeliny indray mandeha isan-kerinandro ny sira, PK na metalin blu. Ny ampahany kely amin'ny fandaitra manan-danja.
Toby fitahirizana tsara ho an'ny karea meter?
Ho an'ny fitomboan'ny hafanana isaky ny metatra toradro dia azo isaina amin'ny fampitomboan'ny dobo PxLxT.
Ohatra, ny dobo famokarana amorom-paty mamelatra 280cm x 300cm x 25cm miaraka amin'ny rano anaty rano 10 - 15cm ary amin'ny famokarana rano, ny dobo dia afaka manangona ny zana-ketsa 50.000 mandra-pahatongan'ny 2 - 3.
Inona ny lanjan'ny fatran'ny 600cmx200x65cm?
Ny fianarana aloha dia mety eo anelanelan'ny 500 - 1.000 tail.
Mandra-pahoviana no ahazoan-kanina ny voam-bary na fengli?
Ny masom-bibilava manomboka amin'ny efatra andro dia afaka omena vilany vovoka saingy amin'ny kely fotsiny.
Ny tanjon'ny fanomezana vovo-dipoavatra ho an'ny lava-dranomanga mba hampitomboana ny angovo avy amin'ny voam-bary mba hahatonga ny lavenona hohanina ho salama sy matanjaka kokoa
Saingy tsy maintsy omena kankana an-kibo toy ny fanomezana proteinina izany, fa ireo izay manana fahasarotana amin'ny famoahana kankana an-kibony dia mety hosoloina amin'ny maggot pasta.
Ny pensilihazo dia atao amin'ny maggot na olitra na larvae volon'ny mainty na miaramila miaramila.
Ny fomba tsotra dia mora, toy ny fanaovana pasteur avy amin'ny kankana siloka.
Izany no fitaovana fototra voalohany amin'ny endriky ny maggot maggot mifangaro amin'ny zavatra hafa ao anaty blender.
Alohan'ny fampiasana azy, tehirizo ao amin'ny vata fampangatsiahana mandritra ny ora 24 mba ahafahana mameno bebe kokoa ny votoatin-tsakafo voa-janahary.
Ho fampifangaroana tanteraka, afaka mahita ny tranokala ianao www.YurieBSF.com
Firy gram-pametahana vovoka na fengli no omena mba hanomezana ny lavenona misy poizina?
Ny pelettes dia mavesatra raha oharina amin'ny gram iray. Ny fomba fitantanana dia azo zaraina mivantana amin'ny lava-poana.
Ahoana no hanomezanao ireo lavadrano trondro, mila mandeha any amin'ny bibis aloha ve ianao?
Ny sakafo dia tokony "homana" aloha, ny tanjon'izany dia ny manao izany mba hanitarana ny sakafo any ivelan'ny kibon'ilay trondro, ka dia feno haingana ireo trondro ary koa tsy misoroka.
Ny fomba fambolena dia ireto manaraka ireto:
Atsipazo anaty rano kely ny rano kely, ary ataovy izay hahazoana antoka fa tsy mimamo.
Avelao hohanina ny sakafo izay nalaina ho an'ny 15 - 30 minitra mandra-pahatsiaro ny sakafo rehefa mahatsapa na mena.
Ankoatra izany, ny lavenona mani-poana dia vonona ny hameno azy.
Ampitahao ny sakafo. Vitsy kely ny isany.
Omeo azy mandra-piverin'ilay lavenona ny lavenona, Ajanony raha manomboka tsy maniry ny hihinana intsony ny lavenona.
Ataovy azo antoka fa tsy misy sakafo be dia be tsy azo hanina amin'ny lavanila. Aza avela hipetraka betsaka amin'ny faran'ny dobo izay amoniaka na poizina ho an'ny voanio sigara.
Ahoana no hanomezana anao kankana matavy tsara?
Ho an'ny vokatra fara-tampony, ny fanomezana siramiry dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto:
Ny dingana voalohany, voalohany dia simba ny kankana kiraro, ka lany ny orana mandritra ny iray na roa andro.
Aorian'izay, alohan'ny hisasana, diovy ny rano mandra-pahadio tanteraka.
Ataovy azo antoka fa tsy misy fatin'olona sy fananganana kankana an-kibon'ny tany amin'ny faran'ny dobo izay mampihena ny kalitaon'ny rano.
Impiry no misakafo mandritra ny fotoan'ny orana?
Rehefa manome sakafo ara-potoana ny orana mandritra ny vanim-potoanan'ny orana, dia ajanony ny fisian'ny orana mandritra ny iray na adiny roa, mba tsy hifangaroan'ny rano ny rano.
Raha lava ny haben'ny orana, dia ampy indroa isan'andro ny sakafo, izany dia manome ny fotoana famatsiana hohanina sy tsaratsara kokoa amin'ny sigara.
Aza misakafo rehefa avy ny orana na ny orana fotsiny, ny siramamy izay homena rehefa mitrona dia mety ho tratran'ny aretina.
Satria hohanina ny sakafom-bary ary hampiakatra ny rano manonja.
Ny vokatra ratsy hafa dia ny hoe hihatsara ny toe-piainana toy ny holatra ary hampijalin'ny trondro.
Inona no sakafo tsara indrindra rehefa nesorina ny casut?
Omeo fengli zero.
Vetivety dia tapaka ny fomba.
Mbola eo amin'ny gram iray monja ny fitantanana ny casut.
Na ny tsara indrindra manome ny pasta maitso.
Aorian'ny voankazo matanjaka dia azo omena psc premium. Na hamonjy ny vidin'ny sakafo maggot pellets proteinina avo.
Ankoatra izay ahitana ny sakafo mahavelona sy ny proteinina ambony, ny vidin'ny fanaovana pèlettes maggot dia mora ihany koa, eo amin'ny 3.000 / kg ihany.
Ity no tsiambaratelo mahatsikaiky mahatsikaiky mavesatra, izay sakafo matsora mora vidy nefa mahasalama.
Inona no sakafo hafa nomena mba hanatsarana haingon-tena?
Ho mora sy mora ny manamboatra ny "maggot", ny fomba hanokafana azy amin'ny Google, www.YurieBSF.com
Ahoana no ahafahanao manamboatra mofomamy 1 - 2 amin'ny fiparitahan'ny fotsy fotsy?
Ny antony mahatonga ny aretina fotsy fotsy dia ny fipoahan'ny dobo feno masoandro ary ny rano dia matevina.
Ny toetra voalohany dia rano fisotro mena ary avy eo fotsy fotsy, izany hoe holatra.
Mba hisorohana an'io olana io, dia omena tafo eo ambonin'ny dobo, na mety hanome endrika ravina toy ny tafo.
Inona no antony mahatonga ny vongan-dranomasina eo akaikin'ny tsipika?
Ny vongany eo akaikin'ny volony dia vokatry ny voka-dratsin'ny sakafo sisa tavela izay lasa amoniaka.
Ankoatr'izany, dia vokatry ny voka-dratsiny be dia be any amin'ny faran'ny dobo.
Ny vahaolana dia ny mandamina ny habetsaky ny sakafo mba tsy hohanina loatra ary lasa loharanon'ny poizina ho an'ny lava-trondro.
Arovy ny dobo tsy tapaka tsy tapaka, ka atolory amin'ny fandefasana rano hivoahana ny amoniaka efa misy.
Nahoana no misy vongan-dranomandry?
Ny antony iray dia satria be loatra ny rano.
Mba handresena izany, azerao ny rano, ary ampio ny probiotika.
Probiotika raha azo omena ravina papay mandeha matetika ny fisorohana.
Na ampiasain'ny ravin-tsakafo Noni.
Azonao atao ny maka ny lesona ao amin'ny tranonkala www.YurieBSF.com
Inona no mahatonga ny trondro hikoriana amin'ny rano?
Ny antony trondro misoroka dia mety satria ny ankamaroan'ny sakafo dia omena, na noho ny toetr'andro mangatsiaka.
Ahoana no hiatrehana trondro misoratsoratra?
Ny dingana voalohany dia ny manome metallin blu, avy eo dia adiny telo dia manolo ny rano ho an'ny 50%.
Ny dingana faharoa, dia ataovy izay hampihenana ny sakafo hafa, ary alaina aloha vao omena trondro.
Ho anareo izay mametraka ilay dobo eo ambanin'ny tokotanin'ny trano.
Ataovy azo antoka fa ny ranon'orana izay mianjera amin'ny kilaoty dia tsy miditra avy hatrany ao anaty dobo, satria misy poizina maintim-borona avy amin'ny kisoa.
Inona no mahatonga ny fotsy hoditra ao amin'ny kibon'ny tany eo akaikin'ny tavy?
Ny antony voalohany mahatonga ny aretina dia lasibatry ny famatsiana tafahoatra.
Ny sakafo mahasalama dia miteraka resa-be maro hipetraka ao ambanin'ny faran'ny dobo mifangaro amin'ny mikraoba ary lasa voan'ny aretina.
Ny vahaolana dia ny mamakivaky ny lakandrano ambany amin'ny dobo. Ary ampitahao ny ampahany amin'ny sakafo tsy niparitaka na niparitaka be.
Tsara ve ny manampy ny curcuma?
Tena tsara tokoa ny mampitombo ny fofona amin'ny endriky ny ginger na ginger na tongolo gilasy na ravinkazo azo avy amin'ny ravina izay mando be dia manampy amin'ny fitomboan'ny fitomboan'ny trondro.
Ireo zavamaniry voajanahary ireo ihany koa dia tsara ho toy ny voajanahary voajanahary.
Ahoana no fomba ifanatrehanao amin'ny hatsaran-tarehy?
Ireto misy fomba sasantsasany ahafahana miatrika ny moana:
Atsaharo ny rano ambany rano.
Atsaharo ny sokatra mihantona
Push 3-5 fotsy fotsy fotsy ary miparitaka amin'ny ala maina
Atsipazo sira ny trondro ao anaty ala.
Mipetraha amin'ny fanafody manga ao anaty ranom-potaka manga.
Ny metaly etsy ambony ihany koa dia fanafody handresena ny vongan-dranomandry manimba, ny rano dia mora simba na mamony.
Firy andro aorian'ny famoahana ny voanio sokatra no voajanahary?
Ataovy ny karazany voalohany taorian'ny andro 15.
Fa ny zavatra raisina dia ampy bendolan na fotsiny plentongan.
Dimy andro taty aoriana, ataovy ny karazana.
Aza sokajiana ny trondro rehetra ao anatin'ny taona 15 isan'andro, mety ho tratry ny loza ho an'ny fahafatesana trondro izany.
Manao ahoana ny haavon'ny rano ho an'ny fofom-poana?
Ny haavon'ny rano dia tsy tokony hihoatra ny 20cm.
Moa ve ny lokon'ny rano mena ho an'ny sigara?
Raha toa ka tsy olana ny fitomboan'ny trondro.
Raha tsara kokoa ny zava-mitranga, dia araho amin'ny fitsaboana tsy tapaka.
Ahoana no ahafahanao manosotra ny voan'ny sigara 3-4 tsy mora maty?
Ataonao izany amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fahitana ny dobo amin'ny masoandro, ary aoka ny ¼ ampahany amin'ny dobo dia ho rakotra ravina banana ohatra.
Raha toa ny toetry ny dobo tsy misy tafo ary manamboatra ny dobo ny masoandro amin'ny andro rehetra, dia ataovy ny fiovan'ny rano toy ny 30 - 50%.
Ahoana no ahafahan'ny voa mitombo amin'ny farany?
Ny fomba tsotra indrindra dia ny mamatsy voa voajanahary, ny sakafo mahavelona sy ny proteinina ambony.
Fa raha mividy sakafo miaraka amin'ireto fepetra ao amin'ny magazay ireto ianao dia tsy ho afaka hihinana ny vidiny.
Noho izany, ny alikaola dia tsy maintsy manao ny sakafo ho anao manokana izay mifanaraka amin'ny filan'ny lava-boasary amin'ny vidiny mora indrindra.
Ny endriky ny kôpitaly na maggot na larvae miaramila miaramila.
Ny fomba fiasa dia rehefa efatra andro ny lava-trondro, ny kôpitaly dia voatoto na voatoto ary nomena ny lavenona matevina.
Manomeza an-tsehatra mba hahitana ny ampahany amin'ny trondro rehetra.
Atsofohy ny kakaban mba tsy hihazakazaka sy hametrahana ny famokarana angadrano.
Impiry impiry moa ianao tokony hisolo ny rano?
Ny fanoloana rano dia tokony hiorina amin'ny toetry ny rano. Satria samy manana ny toetry ny rano ny tsirairay.
Tsy maintsy hosoloina avy hatrany ny endriky ny rano rehefa manomboka mandoaka ny rano.
Na rehefa nanomboka nihetsika ny trondro.
Ny fanolo ny rano dia tsy indray mandeha fotsiny, fa ny antsasaky ny ambony indrindra ary atao indray ny ampitson'iny mandra-piverin'ny trondro miverina mivoatra.
Ahoana no ataonao amin'ny sigara, inona no vokatra mitombo?
Maro ireo antony mahatonga ny fitomboan'ny sokatra kuntet, amin'ny ankapobeny noho ny tsy fahampian'ny sakafo sy ny kalitaon'ny sakafo homena dia kely ihany koa.
Ny olana amin'ny habetsaky ny fiterahana dia miseho any amin'ny faritra maro.
Noho izany, ireo tantsaha mpiompy dia tokony hamorona amin'ny fanaovana ny sakafony manokana.
Ny vahaolana iray dia ny mamorona sakafo hafa avy amin'ny maggot.
Azo jerena ao amin'ny tranonkalan'ny yurie BSF ny antsipiriany momba ny fomba fanaovana sakafo hafa avy amin'ny maggot.
Ao amin'ny google type yurie bsf na karazana www.yuriebsf.com
Ahoana ny fomba hanaovana ny rano mamy?
Mandritra izany, tsy ny lokon'ny rano maitso no alefa, fa misy biby kely vitsy kely ao anaty rano miomanana.
Satria ny fisian'ny biby kely miaina miaina dia manondro fa ny rano dia tsara ho antsika hanely ny voa.
Bibikely bitika amin'ny endriky ny lobolobo moukitika, zavamaniry plankton ary ny hafa ankoatry ny rano mendrika mba hiparitaka trondro ary koa sakafo fanampiny ho an'ny trondro.
Ity misy fomba iray ahafahana manao dobo maitso maitso:
Fiarovana amin'ny rano madio, Ny rano madio dia azo avy amin'ny rano tsara na ny tany.
Raha tsy misy rano tsara ary te hampiasa rano azo avy amin'ny rano pam, dia tokony ampiharina farafahakeliny telo andro farafaharatsiny mba hitoeran'ny vy sy ny disadisa eo ambanin'ny faritry ny fitoeran-drano.
Ny dingana manaraka dia mampamirapiratra amin'ny alàlan'ny fampidirana sakam-bozaka iray ary mamela azy mandritra ny iray na roa herinandro.
Fitantanam-pitondrana samihafa ihany koa ary manampy amin'ny fitomboan'ny rano anaty rano.
Rehefa afaka iray na roa herinandro dia hiverina maitso ny rano ary betsaka ny biby moka ary biby kely hafa.
Ahoana no hiatrehana ireo dobo marefo?
Ny antony mahatonga ny dobo mando dia ny haavon'ny hazandrano ao anaty dobo.
Raha toa ka mitranga izany, dia manamaivana rehefa manasaraka na manasitrana trondro any amin'ny dobo samihafa.
Nahoana no misy atody maro be, nefa maty maro?
Ny isan'ireo olona izay maty dia satria ny kalitaon'ny reny dia tsy vonona.
Noho izany, ataovy izay hahazoana antoka fa tena ilaina tokoa ny fianarana mofomamy.
Ataovy azo antoka fa ny fikarakarana ny hoditra dia tokony homena proteinina avo lenta ary hamokarana sakafo sy fiheverana manokana alohan'ny hamoahana azy
Ahoana ny fomba anaovanao lavan-dranomasina haingana?
Manome sakafo mahavelona toy ny bakteria BSF.
Omeo ny voa voalohany aloha alohan'ny hanomezana azy, ary hanome ravinala na ravina papaya amin'ny famokarana kely ho toy ny voajanahary voajanahary ho an'ny larvae.
Hamarino toerana 99 ho an'ny toeram-pambolena hafa!
Mbola manana fanontaniana ihany ve?
Mifandraisa amin'i Yurie BSF
Fambolena BSF Media Maggot Bran
Ahoana ny fomba fandefasana ny biby vao teraka 2019 BSF
Ahoana ny fomba fambolena rice branche / Rice Bran hohan-trondro
Ny fampiasana palma misy menaka palmie ho an'ny sakafo
Ahoana no handotoana ny Sangkuriang 2019 Catfish